बाँकेमा कोरोनाको सूचना सम्प्रेषणमा समन्वय अभाव – Health Post Nepal
बाँकेमा कोरोनाको सूचना सम्प्रेषणमा समन्वय अभाव
२०७६ चैत २४ गते ९:५५
कोरोनाविरुद्ध सक्रिय बाँकेका सरकारी संयन्त्रण र स्वास्थ्य निकायबीच सूचना आदानप्रदानमा समन्वय अभाव हुँदा जनमानसमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुने देखिएको छ ।
जिल्लामा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र सचेतनाका लागि स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन भई कोरोनासम्बन्धी केही सूचना जारी गनुपर्ने भए स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् सार्वजनिक गरिने नीति अवलम्बन गरिए पनि बाँकेमा त्यस्तो नहुने गरेको पाइएको छ ।
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले शनिवार भारतको राजधानी दिल्लीस्थित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागि भएका नेपालगन्जका तीन जनाको कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ आएको सूचना सार्वजनिक गर्यो । तर आइर्तवारसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा र जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले त्यसका बारेमा थाहा नपाएर अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका थिए ।
दिल्लीको निजामुद्धिन स्थित तब्लीगी मरकज जमातमा सहभागि भएकाहरु धेरै कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यहाँ सहभागि हुन गएका बिभिन्न देशका नागरिक मध्ये नेपालगञ्जका तीन जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिर्पोट नेगेटिभ आएको थियो ।
उनीहरुलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको आइसोलेशन कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो । दिल्लीबाट आएकाहरुमा कसैमा कोरोनाको लक्षण थिएन भने सामान्य ज्वरो समेत नभएपनि नमुना परीक्षण गरिएको थियो । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले यि बाहेक अन्य नूमना समेत पठाएको थियो ।
ती सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । यो सूचना नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. असिम किदवाईले स्वास्थ्य कार्यालय सँग समन्वय नै नगरि सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा शेयर गरेका थिए भने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले सूचना नै जारी गरेको थियो ।
उक्त सूचनाका विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा र जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँके असमन्जसमा देखिए । कुन–कुन व्यक्ति र कहाँको क्वारेन्टाइनका व्यक्तिको रिर्पोट आएको भन्दै सोधिखोजी शुरु गरे ।
जनस्वास्थ्यका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले मेडिकल कलेजले आफुहरुकै माध्यमबाट स्याम्पल परीक्षणका लागि पठाएको भए पनि रिर्पोट सार्वजनिक भएको विषयमा जानकारी नभएको बताए । यद्यपी साँझ ५ बजे उनले पाँच जनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएको त्यसमा दिल्लीको मरकज बाट फर्किएका ३ जनाको समेत निगेटिभ रिजल्ट आएको बताए ।
उनले जिल्लामा आफुहरु मार्फत सूचना सार्वजनिक हुने भएकाले अन्य स्वास्थ्य निकायले सार्वजनिक गरेको सूचनाका बारेमा थाहा नभएको बताए । यस्ता किसिमको समस्या आउन नदिनका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले आईतवार देखि कुनै पनि अस्पतालले आँशकिँत बिरामीको नमुना टेस्टको लागि पठाँउदा सेम्पल फर्ममा स्वास्थ्य कार्यालयको महामारी शाखाको ९८५८०५१४१४ ल्याब फर्ममा लेखेर अनिवार्य पठाउनुपर्ने अनुरोध गरेको छ ।
भारतको राजधानी दिल्लीस्थित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागि भएका नेपालगन्जका तीन जनाको कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ । दिल्लीको निजामुद्धिन स्थित तब्लीगी मरकज जमातमा सहभागि भएकाहरु धेरै कोरोना संक्रमण देखिएको ती कार्यक्रममा नेपालका १९ जना सहभागी भएका मध्ये ३ जना नेपालगञ्जको पनि रहेको हल्ला चलेपछि बाँके प्रहरीले खोजेर उनलाई अस्पताल भर्ना गराएको थियो ।
त्यहाँ सहभागि हुन गएका बिभिन्न देशका नागरिक मध्ये नेपालगन्जका तीन जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिर्पोट नेगेटिभ आएको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सहायक निर्देशक डा. नितेश कुमार कनोडियाले जानकारी दिए । कनोडियाका अनुसार, उनीहरुलाई नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको आइसोलेशन कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
दिल्लीबाट आएकाहरुमा कसैमा कोरोनाको लक्षण थिएन भने सामान्य ज्वरो समेत नभएको डा. असिम किदवाईले बताए । ‘फेरी पनि हामीले तत्कालै उहाँहरुको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठायौ र अहिले नतिजा नेगेटिभ आएको छ ।’— डा. किद्वाईले भने । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले यि बाहेक अन्य नूमना समेत पठाएको थियो । ती सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ ।
यिनी ३ जना सहित बाँकेबाट कोरोना भाईरसको ‘स्वाव’ परीक्षणका लागि काठमाण्डौ पठाइएको ३१ मध्ये अहिले सम्म ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार आईतवारसम्म बाँकेका ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ।
त्यसैगरी १ जनाको ‘थ्रोट स्वाव’ परिक्षणकै क्रममा रहेको श्रेष्ठले बताए । भारतसँग सिमा जोडिएको जिल्ला भएकाले बाँके कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ । यद्यपी हासम्म बाँकेका कुनैपनि ब्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको लक्षण नदेखिएको श्रेष्ठले बताए ।